डिशहोममार्फत अब विश्वभरबाट 'सर्ट मुभी' हेर्न सकिने !
डिशहोममार्फत अब विश्वभरबाट ‘सर्ट मुभी’ हेर्न सकिने !
काठमाडौँ । डिशहोमले सर्ट टिभीसँगको सहकार्यमा सर्ट मुभीहरूको प्रसारण सुरु गरेको छ । सर्ट टिभीका फाउण्डर तथा सीईओ कार्टर पिल्चरले सोमबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा नेपालमा सर्ट टिभी शुभारम्भ गरेका हुन् ।
डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले सर्ट टिभी लन्च गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो मुलुक हो भन्दै अब डिशहोममार्फत विश्वभरबाट सर्ट मुभी हेर्न सकिने बताए । उनले यसबाट नेपाली कलाकार अभिनीत सर्ट मुभीसमेत विश्वभर पुग्न सक्ने बाटो खुलेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त लोकप्रिय सर्ट मुभीले दर्शकहरूको आकर्षण बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली सर्ट मुभी पुर्‍याउनसमेत सहयोग पुग्ने डिशहोमकाे विश्वास छ ।